Daawooyinka Dhirta ee 5 ee Daaweynta Caadada - Kordhinta Caafimaadkaaga - TELES RELAY
ACCUEIL » Daawooyinka dabiiciga ah Daawooyinka Dhirta 5 ee Daaweynta Daawada Caadiga ah ee Daaweynta - Hagaajinta Caafimaadkaaga
Dhamaan dumarka, inta u dhexeysa qaangoosnimada iyo menopause, waxay leeyihiin, bil kadib bisha, la socdaan muddooyinkooda. Nidaamyadan dabiiciga ah ee dabiiciga ahi waxay sababi kartaa dhibaatooyin badan oo saameeya hawlaha maalin kasta. Maxaa dhacaya markaad la kulanto daahitaan caadada ah?
Maqaalkani, waxaan ku baraynaa inaad diyaariso daawooyinka dhirta 5 ee ku caawin kara haddii aad qabtid dib u dhac si aad noloshaada u sii wadato iyada oo aan caqabad ku noqon.
Waa maxay dib u dhaca caadada?
Iyada oo ku xiran munaasadda, da'daada iyo habka noloshaada, daahitaanka iyo maqnaanshaha caadada waxay yeelan kartaa macnooyin dhowr ah. Si kastaba ha ahaatee, waa muhiim inaad la tasho khabiir iyo la tasho dhakhtar.
Tusaale ahaan, waxay noqon kartaa sababtoo ah ma aadan mudo dheer qaadan muddada aad wareegeysidna wareeggaagu wali si caadi ah uma socon. Dhallinyaradu, caadada caadada ee wareegga caadadu way dhacdaa. Suuxdinta waxaa laga yaabaa inay timaaddo badan tahay, waa muddo dheer waxayna jirtaa dib u dhac.
Haddii sanadka ka soo wareego xilligaaga koowaad iyo isbedelka wareegga wareegga, la tasho dhakhtarka dumarka oo ku hagaya adiga.
Intaa waxaa dheer, dib u dhigista caadadu waxay noqon kartaa mid u dhiganta uurka. Intaa waxaa dheer, waa nooc ka mid ah digniin ama digniin ah in jidhkaagu ku siiyo kuu sheegaayo in wax kale uu ku socdo:
Waxaa jiri kara caabuq
Waxaa laga yaabaa in aad qabtid cudur aad u daran ama xanuun
Waa maxay sababta sharciyada dib loo dhigay?
Sababta dib-u-dhaca caadada ah ee aad qabtid ma aha mid la xiriirta kuwa kor ku xusan? Xasuuso caadadaada waa hab hormoon ah iyo waxyaabo badan oo saameynaya wareeggaaga.
Qalabka guriga waxaa loo isticmaalay qarniyo si loo xalliyo dhibaatooyinka xayawaanka caadada, laga bilaabo xilliga caadada ah ilaa muddooyinka aan caadiga ahayn.
Soo hel maqaalkan: Xunkmooyinka 5 oo raaci kara daaweynta xanuunka gentiskaba
Dib-u-hagaajinta daahitaanka caadada
1. Soo galinta Angelica
Warshad Tani, diyaarisay foomka offaleebo waxay sababtaa dhaqdhaqaaqa ilmo-galeenka, sidaas awgeed caadadu waxay timaadaa waqti u dhow wakhtiga la filayo inay timaaddo.
Tani waxay joojin doontaa walbahaarka iyo welwelka.
2 koob biyo ah (500 ml)
2 qiyaasta xididada angelica (30 g)
Marka hore, kuleylka biyaha.
Marka barta karkarinta la gaarsiiyo, ku dar xididka angelica iyo daboolka dhowr daqiiqadood, si ay sifooyinka faa'iido leh ee warshadu ay ku badan yihiin dareeraha.
Markaan waqtigaan dhaafo, filter, ha qaboobin iyo qaado qaadiskan 3 jeer maalintii ilaa dhamaadka caadada caadada.
Dhibaatadan waxaa lagula talinayaa dhamaan bukaanada qaba xanuunka caadada iyo wareegga aan caadiga ahayn. Waa faa'iido leh iyo xoog leh marka daawooyinka hormoonku ay ka hortagaan ama marka lagu daro kuwaan.
3 qiyaasta xididada Great Aunea (45 g)
1 ½ koob oo biyo ah (300 ml)
Kuleylka biyaha iyo ku dar xididka sannadka ee weyn marka uu boogo. Dabool oo u diyaari daqiiqadaha 30.
Waxaa lagu talinayaa in la cabbo faleebo this 2 jeer maalintii halkii adeeg ee 50 ml (¼ koob) mar kasta.
Xaaladaha badankood, caadadu waxay dhacdaa isla markiiba ama ugu dambeyn maalintaas. Haddii aad u maleyneyso inaad uur leedahay, waxaa muhiim ah in la taxadaro marka la isticmaalayo warshadan.
3. Shaaha Boldo
Le Boldo waa geedka uu xididkiisu leeyahay waxyaabo badan, oo ay ka mid tahay in lagu dhiirigeliyo ilmo-galeenka. Isticmaalka faleebadani waxay keenaysaa dhiig-baxa si deg-deg ah oo wax ku ool ah.
5 boldo baxo
Bakhaar dhexdhexaad ah, ku dar qadarka biyaha ee kor ku xusan, dabool oo karkarin.
Ka dibna ku dar caleemaha 5 ee Boldo oo u daadi wareega 10.
Ka dib marka aad kuleylka dabka ku shubeyso, dabool daboolka oo ha istaagaan daqiiqado 15.
Fiiri diyaarka iyo ha qaboobin. Qaado hal koob oo ah faleebadan oo ah 3 jeer maalintii.
4. Abuurka dabiiciga ah ee digaaga
Abuurtan Kuwani, inkastoo ay u muuqdaan kuwo aan wax faa'iido ah lahayn, waxay faa'iido u leeyihiin inay keenaan qandhada uterine-ka iyo sidaas darteed keena bilawga xeerarka.
Waxay yihiin hal tijaabo oo dheeraad ah oo ku saabsan dhammaan faa'iidooyinka aad ka heli karto warshad sida karootada duurjoogta ah.
1 shaaha macdanta duurjoogta ah (5 g)
Koobka 1 ee biyaha (200 ml)
Ka dib markii ay soo iibsadaan miraha duurjoogta ah ee dukaanka cuntada ama ka soo qaadashada beerta meesha lagu beeray, ha ilaawin inaad iyaga u isticmaashid ka hor cunto kasta.
Waxa laga yaabaa in lagama maarmaan noqoto in la qaato galaas biyo ah si loo fududeeyo in la cuno. Saameyntooda waxay u dhaqmi doonaan si sax ah oo wax ku ool ah.
5. Clove dhir dabiici ah
Faleebo, in taas oo keenta is-goysyada derbiyada iyo murqaha ilmo-galeenka, si dhakhso ah u keenaan bilawga caadada. Sidaa darteed, waa mid ka mid ah hababka ugu waxtarka badan leh iyo sidoo kale wuxuu leeyahay dhadhan qani ku ah mahad oo ku toon ah.
Sidoo kale akhri: 5 Xeeladaha Dabiiciga ah ee la Dagaalanka Cudurada Ilkaha
Si aad u diyaariso daaweyntan, kuleylka labadaba isla markaaba.
Ka dib daqiiqadaha 2 ee karkarinta, xir kuleylka oo ha istaagaan.
Ka dibna soo saar bakeerigaaga oo cab cabirka 3 kulul mar inta lagu jiro maalinta si loo soo saaro saameyn ballaaran.
Si kastaba ha noqotee, dib u dhigista xeerarku waxay noqon karaan dhibaato halis ah. Sidaa darteed, haddii ay dhacdo marar badan, waxa fiican in la isticmaalo xirfadle ah si loo xalliyo dhibaatada iyada oo loo marayo habab kale.
Citrus si loo kordhiyo difaaca
Waxaanu kula wadaagi doonaa qodobkan daaweyn liin ah kaas oo kuu oggolaan doona inaad kordhiso oo aad xoojiso difaacaaga. Read more »
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/5-remedes-a-base-de-plantes-pour-remedier-au-retard-menstruel/